Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị njikere maka nzukọ 4 gvSIG - Geofumadas
Ọktoba, 2008 GvSIG
Oge ndebanye aha maka nzukọ nke 4 gvSIG, nke Ministry of Infrastructure and Transport (CIT) nke Generalitat meghewo ugbu a.
Ndị a ga - eme site na Disemba 3 ruo 5, 2008 na Valencia Conference Center, nke afọ a ga - anabatakwa Nzukọ OGC (Open Geospatial Consortium), site na Disemba 1 ruo 5, na cbọchị Eclipse na Disemba 2.
Ndebanye aha bụ n'efu, agbanyeghị ikike nwere oke ma a ga-eme ya site na ụdị dị na websaịtị Conference (http://www.jornadasgvsig.gva.es/cas/boletindeinscripcion/).
Na-esote m na-egosi oku nke Piperal Peral:
"N'ime naanị afọ anọ, nzukọ ndị gvSIG abụrụla ihe njiri mara mba ụwa nke Geographic Information Systems na Spatial Data Infrastructures. Ebe nzukọ ebe ọnụ ọgụgụ ndị ọkachamara na-aba ụba na-akụziri anyị ọ bụghị naanị. na ọ ga - ekwe omume ịnye ụzọ ọkachamara na mpaghara ndị a dabere na njikọta nke teknụzụ n'efu, mana teknụzụ ndị a na - ejedebe ịdị mma karịa usoro kpochapụwo dabere na ụdị ndị nwere ikike na-anaghị ekwe ka ịnweta ihe ọmụma.
A na-ewepụta ihe nrịba ama na-eji ntụkwasị obi na-agbaso ụkpụrụ mmekọrịta nke ụwa niile ma na-adigidekwa karịa, ebe ọ bụ na, ọ dị mkpa icheta ya oge niile ka ọ dị mkpa, iji teknụzụ n'efu, ndị na-enye anyị ohere inweta ihe ọmụma, bụ ndị dabara anyị. iji nye nnwere onwe dị mkpa nke na-enye anyị ohere inwere onwe anyị iji gosipụta mmalite nke Sistem Ozi Anyị; akụkụ dị mkpa maka nzukọ ọ bụla.
Ihe ncheta nke ubochi ndia bu gvSIG. Ijikọ ọnụ Anyi chetara na ubochi ndi gara aga bu ihe eji eme ihe Njikọ na ỌganihuN'ime ha, ntụgharị uche nke anyị welitere bụ ihe ndị a: gvSIG toro nke ukwuu ma dịkwa ọsọsọ, oge eruola ka edozie, ijikọ uto niile n'ụzọ ga-enyere anyị aka ịga n'ihu. N’ezie, anyị dị njikere ịga n’ihu. Ndụmọdụ anyị ugbu a abụghị ime njem nke akara akara, kama nke ahụ, anyị ga-ewulite ụzọ ọhụrụ ahụ. Na anyị hụrụ ibe anyị, na anyị na-agwa ibe anyị okwu, na anyị gbanwere echiche, iche echiche, wdg. ka i wee na-aga n’ihu. Mana dị ka anyị kwuru n'okwu ebumnuche nke nzukọ a: vingga n'ihu.
Achọghị m ka m kwụsị n'echetaghị na ị ga - enwe ike ịhụ na afọ a, n'oge nnọkọ gvSIG a ga - eme ihe omume abụọ ga - agbakọ, dịka nzukọ nke Kọmitii Nkà na ụzụ nke Mepee Geospatial Consortium (OGC) na ijide a Cbọchị eklips nke nwere ulo oru flagship nke ozo nke ulo oru anyi dika oru MOSKitt.
N’adighi n’ihu, kpọọ gị oku ka ị bịarute Valencia n’ụbọchị ndị ahụ na-atụ anya na ya na ịbụ ndị ọdịmma obodo anyị, ụbọchị ndị a nwere ike ịba uru na afọ ojuju.
Previous Post«Previous Ụdị Blogger
Next Post Umapper, na-ebipụta map na weebụNext »